COPAC Yotsvaga Rutsigiro rweMasangano Akazvimirira Referendamu Isati Yaitwa
Mugovera, Kukadzi 06, 2016 Local time: 02:05
HARARE— Komiti yeparamende yakatungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCOPAC, yakumbira masangano anoshanda akazvimirira kuti aite chisungo chekushanda nayo mukushambadza bumbiro idzva pamwe nekukurudzira veruzhinji kuti vatsigire bumbiro iri pareferendamu iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Vachitaura mushure memusangano uyu, mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaPual Mangwana veZanu PF, vati vachashanda chete nemasangano anemaonero seakafanana neeCOPAC.
VaMangwana vatiwo masangano aya anotarisirwa kubatsirawo COPAC kudhinda mamwe magwaro nekuti akadhindiswa neCOPAC anosvika zviuru makumi mapfumbamwe ari mashoma.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora veMDC-T, vatiwo COPAC iri kutaura nemapurisa kuitira kuti misangano yekushambadza bumbiro isavhiringidzwe.
Kunyange hazvo VaMwonzora naVaMangwana vati masangano ese apinda mumusangano wavo aratidza chido chekushanda navo, vamwe vapinda mumusangano uyo vanoti harisi basa remasangano akazvimirira rekukurudzira veruzhinji kuti vatsigire bumbiro iri asi kuti basa rawo nderekudzidzisa veruzhinji kuti vagokwanisa kuvhota vaine ruzivo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaJoy Mabhenge, veInstitute for a Democractic Alternative for Zimbabwe, vanoti masangano anofanirwa kubatsira veruzhinji kuti vanzwisise zvinoreva gwaro rebumbiro idzva, kwete kuvaudza zvavanofanirwa kuita pareferendamu.
Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, VaNixon Nyikadzino, vanoti zvinonetsa kuti vabvume kushanda neCOPAC vasati vanzwa pfungwa dzenhengo dzesangano ravo.
COPAC inoti basa rekushambadza bumbiro idzva richatanga neMuvhuro. Zimbabwe inotarisirwa kuita referendamu musi wa 16 Kurume.
Dare repamusoro rinotarisirwa kupa mutongo waro neChishanu panyaya yakakwidzwa nesangano reNational constitutional Assembly richitsutsumwa kuti nguva yakapihwa vanhu nehurumende kuti vazeye zviri mubumbiro idzva, ishoma.
Hurumende Inotara Nzara seDambudziko Rakakurisisa Munyika
Hurumende yabvuma zvino kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu, izvo zvaita kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vatare nzara iriko sedambudziko rakaipisisa.
VOA60 Africa - S. Africa: 90 miners rescued, three missing after a cave-in at a gold mine
S. Africa: 90 miners rescued, three missing after a cave-in at a gold mine
Mabhanga Maviri muZimbabwe Anobviswa paZvirango Zvakatemerwa neAmerica
Hurumende yeAmerica yabvisa mabhanga maviri anoti reAgribank nere International Development Bank of Zimbabwe pazvirango zvakatemerwa makambani nevamwe vari muhurumende yeZanu-PF kusanganisira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
Rooftop Yovaka Muzinda weChizvinozvino Munyaya dzeMitambo
Mukuru weRooftop Promotions, VaDavies Guzha, vanoti musha mutsva uyu
uchasimudzira mitambo, mabhaisikopo kana mafirimu emuno ayo asina kwaari kuratidzwa pari zvino.
Hurukuro naVaForbes Matonga
Hurukuro naVaDewa Mavhinga
Mashoko aVaBarack Obama
Misoro Yenhau Dzanhasi Chishanu Kukadzi 5. 2016
Zimbabweans living outside the country who cannot receive our broadcast signals...
Nguva yeChirongwa Muvhuro-Chishanu Nguva dzeChinomwe Manheru 19:00 UTC Time: 1700...
Most ViewedVaCharamba Vonyomba Vamwe muZanu PF Vari Kurwira Chigaro chaVaMugabeNyaya yaVaMugabe Yekuti AU Ibude muUN Yokonzera MutauroMapato Anopikisa Odyira Marasha VaMnangagwaVakawanda Vopesana Pane Zvakakwanisa Kuitwa naVaMugabe Vari Sachigaro weAUVaBiti Vokurudzira Mushandira Pamwe Kuitira Kubvisa Hurumende yeZanu PF